iOS 14 မှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ သီချင်းတွေကို အသံကြားရုံနဲ့ အမြန်ဆုံး ရှာပေးမယ့် Shazam App — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung November 21, 2020 1 Min Read
Facebook တို့ TikTok တို့မှာ Music Video လေး တစ်ပိုင်းတစ်စတွေ့လိုက်လို့ သဘောကျသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်က အဲ့သီးချင်းလေး အစအဆုံး လိုချင်တယ်ဆိုရင်‌ ဘယ်လိုရှာမလဲ? အရင်လို Comment မှာ “Song Name Plz” ဆိုပြီး သွားတောင်းနေဦးမှာလား? iOS 14 မှာတော့ သွားတောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ သီးချင်းကို ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Control Center မှာရှိတဲ့ Shazam ကနေတစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ရှာလို့ရသွားပါပြီ။
Shazam App ကို Control Center မှာ တင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး App Store ကနေ Shazam လို့ ရိုက်ရှာပြီး ဒေါင်းပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ Setting ထဲက Control Center ထဲဝင်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ Music Recognition ဘေးက “+” လက္ခဏာလေးကို နှိပ်ပေးရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ပြီးရင်တော့ Control Center မှာ Shazam iCon လေး ပေါ်လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်မသိတဲ့ သီချင်းတွေကို ဘယ်သူ့မှမေးစရာ မလိုဘဲ အလွယ်တကူ ရှာဖွေလို့ရသွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ TikTok App မှာ စမ်းပြပေးထားပါတယ်။ ပထမဆုံး TikTok ထဲဝင်ပါ။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ သီချင်းကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Control Center က Shazam iCon လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ သီချင်း Noti လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ Noti လေး နှိပ်ပေးလိုက်ရင် ကိုယ်ရှာနေတဲ့ သီချင်းရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook မှာပဲရှာရှာ၊ TikTok မှာပဲရှာရှာ ဘယ်မှာပဲရှာရှာ ဒီနည်းလေးအတိုင်း ရှာပေးလို့ရပါတယ်။ iOS 14 အောက်ဖုန်းတွေမှာတော့ ဒီနည်းကို သုံးမရဘဲ Shazam App ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်း ၂လုံးလိုပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးက သီချင်းဖွင့်ပေးရပြီး နောက်တစ်ဆုံးက Shazam App ကိုဖွင့်ပြီး ရှာပေးရပါတယ်။ ခု iOS 14 မှာတော့ ဖုန်း ၂ လုံးမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ သီချင်းကို ကိုယ့်ဖုန်းထဲက Control Center ကတစ်ဆင့် ရှာရုံပါပဲ။
ခေတ်စားနေတဲ့မြန်မာသီချင်း တော်တော်များများကိုလည်း ရှာပေးနိုင်ပြီဆိုတော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့မြန်မာသီချင်းတွေတော့ ရှာမပေးနိုင်သေးပါဘူး။ နောက်ထပ် Update တွေမှာတော့ ဒီထက်ပိုကောင်းပြီး ပိုစုံလာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။